eHimalaya Online || News from nepal » अभिनेत्री जाह्नवी कपूर लाई आफ्नो एक फ्यानले यस्तो अनौठो डिमाण्ड राखे के पूरा गर्ने सक्छिन त?
अभिनेत्री जाह्नवी कपूर लाई आफ्नो एक फ्यानले यस्तो अनौठो डिमाण्ड राखे के पूरा गर्ने सक्छिन त?
२०७८ बैशाख २ गते बिहिबार ०९:४५
एजेन्सी : बलिउड अभिनेत्री जाह्नवी कपूरको फिल्म ‘रुही’ हालै रिलिज भएको छ। यो फिल्ममा जाह्नवीको अभिनयले वाहवाही पाएको छ। जाह्नवी सामाजिक सञ्जालमा पनि उत्तिकै सक्रिय रहन्छिन्। हाली जाह्नवीले इन्स्टाग्राममा प्रश्नोत्तरबाट फ्यान्ससँग...
एजेन्सी : बलिउड अभिनेत्री जाह्नवी कपूरको फिल्म ‘रुही’ हालै रिलिज भएको छ। यो फिल्ममा जाह्नवीको अभिनयले वाहवाही पाएको छ। जाह्नवी सामाजिक सञ्जालमा पनि उत्तिकै सक्रिय रहन्छिन्। हाली जाह्नवीले इन्स्टाग्राममा प्रश्नोत्तरबाट फ्यान्ससँग कुराकानी गरेकी थिईन्।
यहीँ क्रममा फ्यान्सले उनीसँग उनका आगामी फिल्म देखि उनको निजी जिन्दगीसँग जोडिएको सवाल सोधेका थिए। यसैबीच एक फ्यानले उनलाई अनौठो कुरा सोधे। फ्यानले लेखेका छन् – ‘के हामी कि,स गर्न सक्छौँ?
’जाह्नवीले पनि अनौठो अन्दाजमा फ्यानको प्रश्नको जवाफ दिने मन गरिन्। उनले कि,सको डिमाण्ड सहितको प्रश्नको जवाफ दिनलाई मास्क लगाएको फोटो पोस्ट गरिन् र त्यसमा नो लेखिन्। जाह्नवीको यस्तो अन्दाजलाई फ्यान्सले निकै मन पराएका छन्।
जाह्नवी यो बाहेक अरु थुप्रै रोचक प्रश्नका जवाफ दिएकी छिन। एक युजरले उनलाई डाइट रुटिनको बारेमा सोधेका छन्। यस प्रश्नमा उनले आइसक्रिम कप आफ्नो हातमा लिई एक फोटो शेयर गरी लेखेकी छिन् – ‘एक दिनमा चार स्कूप्स’
एक फ्यानले उनलाई आफ्नो फेभरेट ट्राभलिङ मेमोरीको बारेमा सोधेका छन्। यस सवालमा उनले केही वर्ष अगाडीको दक्षिणी फ्रान्सको रोड ट्रिपलाई आफ्नो फेभरेट ट्राभलिङ मेमोरी भएको बताएकी छिन्।
प्रकाशित मिति २०७८ बैशाख २ गते बिहिबार ०९:४५